१ कोरिन्थी ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१ कोरिन्थी ३:१-२३
३ यसकारण ए भाइहरू हो, परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍तिको निर्देशनबमोजिम चल्ने मानिसहरूसित कुरा गरेजस्तो गरी मैले तिमीहरूसित कुरा गर्न सकिनँ। तर सांसारिक सोचाइ राख्ने मानिसहरूसित अनि बालकसमान ख्रीष्टियनहरूसित जस्तो गरी मैले कुरा गरें। २ मैले तिमीहरूलाई खँदिलो खानेकुरा होइन तर दूध खुवाएँ, किनकि तिमीहरू पचाउन सक्ने भइसकेका थिएनौ। वास्तवमा तिमीहरू अहिले पनि त्यस्तै छौ, ३ किनकि तिमीहरू अझै पनि सांसारिक सोचाइ राख्छौ। तिमीहरूमाझ डाह र कलह छ भने के तिमीहरू संसारका मानिसहरूजस्तै सोच्ने र हिंड्‌ने मानिसहरू भएनौ र? ४ यदि तिमीहरूमध्ये कोही “म पावलको चेला हुँ” भन्छौ र कोहीचाहिं “म अपोल्लसको चेला हुँ” भन्छौ भने के तिमीहरू संसारका मानिसहरूजस्तै भएनौ र? ५ त्यसोभए, अपोल्लस को हो? अनि पावल को हो? प्रभुले हामी प्रत्येकलाई सुम्पनुभएको काम पूरा गर्ने सेवकहरू मात्र हुन्‌, जसद्वारा तिमीहरू येशूका चेला बन्यौ। ६ मैले रोपें, अपोल्लसले पानी हाले तर परमेश्‍वरले त्यसलाई हुर्काउनुभयो। ७ त्यसैले न रोप्ने महत्त्वपूर्ण हो, न त पानी हाल्ने तर परमेश्‍वर, जसले त्यसलाई हुर्काउनुहुन्छ। ८ रोप्ने र पानी हाल्ने दुवै जना एक हुन्‌* तर हरेकले आफ्नो परिश्रमअनुसार इनाम पाउनेछ। ९ किनकि हामी परमेश्‍वरका सहकर्मीहरू हौं। तिमीहरूचाहिं खेतीपाती गरिएको परमेश्‍वरको खेत अनि परमेश्‍वरको भवन हौ। १० मलाई देखाइएको असीम अनुग्रहबमोजिम बुद्धिमान्‌ प्रमुख निर्माताको हैसियतले मैले जग बसालें तर त्यसमाथि निर्माण भने अरू कसैले गरिरहेको छ। तर आफूले कसरी निर्माण गर्दैछु भनी हरेकले जाँचोस्‌। ११ किनकि पहिल्यै बसालिएको जगबाहेक अरू कुनै जग मानिसले बसाल्न सक्दैन र त्यो जग, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। १२ अब यदि कसैले जगमाथि सुन, चाँदी, बहुमूल्य रत्न, काठ, पराल, ठोसोले निर्माण गर्छ भने १३ परीक्षाको दिनमा हरेकको काम प्रकट हुनेछ किनभने आगोले त्यो प्रकट गर्नेछ। अनि हरेकको काम कस्तो छ, त्यो आगोले नै प्रमाणित गर्नेछ। १४ यदि जगमाथि निर्माण गरेको कसैको काम टिकिरहन्छ भने उसले इनाम पाउनेछ। १५ यदि कसैको काम जलेर नाश हुन्छ भने उसले नोक्सानी भोग्नेछ तर आफू भने बच्नेछ। यद्यपि, ऊ आगोबाट मुस्किलले बचेको मानिसजस्तो हुनेछ। १६ तिमीहरू परमेश्‍वरका मन्दिर हौ अनि परमेश्‍वरको पवित्र शक्‍ति तिमीहरूमा बास गर्छ भनेर के तिमीहरूलाई थाह छैन? १७ यदि कसैले परमेश्‍वरको मन्दिरलाई नाश गर्छ भने परमेश्‍वरले उसलाई नाश गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्‍वरको मन्दिर पवित्र छ र तिमीहरू नै त्यो मन्दिर हौ। १८ कसैले आफूलाई नबहकाओस्‌: यदि तिमीहरूमध्ये कसैले आफूलाई यस युगमा बुद्धिमान्‌ छु भनी सम्झन्छ भने ऊ मूर्ख बनोस्‌, ताकि ऊ बुद्धिमान्‌ बन्‍न सकोस्‌। १९ यस संसारको बुद्धि परमेश्‍वरको लागि मूर्खता हो, किनकि यस्तो लेखिएको छ: “उहाँले बुद्धिमान्‌हरूलाई तिनीहरूको आफ्नै धूर्ततामा फस्न दिनुहुन्छ।” २० अनि फेरि: “बुद्धिमान्‌ मानिसहरूको तर्क व्यर्थ छ भनेर यहोवालाई थाह छ।” २१ यसर्थ, मानिसहरूमा कसैले घमन्ड नगरोस्‌, किनकि सबै चीज तिमीहरूकै हुन्‌; २२ चाहे पावल, चाहे अपोल्लस, चाहे केफास, चाहे यो संसार, चाहे जीवन, चाहे मृत्यु, चाहे अहिले यहाँ भएका चीजहरू वा चाहे पछि आउने चीजहरू, ती सबै तिमीहरूकै हुन्‌; २३ अनि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ र ख्रीष्टचाहिं परमेश्‍वरको हुनुहुन्छ।
^ वा, “एकतामा छन्‌।”
१ कोरिन्थी ३